Vaovao - T-shirt dia lamaody malaza ankehitriny
T-shirt dia lamaody malaza ankehitriny. Izy ireo dia tsotra, tsotra ary mora vidy. Notadiavin'ny besinimaro izy ireo. Ka marika firy T-shirt no eny an-tsena, ary rehefa mivory sy misakafo ny namana dia mitete amin'ny akanjo ny tasy. Ahoana ny fanadiovana azy ireo?
1. Avadiho ny T-shirt alohan'ny fanasana, mba tsy ho simba ireo lamina tsara tarehy mandritra ny fanasana.
2. Sasao amin'ny tanana, moramora, aza mampiasa hery,
3. Aza maina ny T-shirt mivantana, avadika ao anatiny mba ho maina. Izany dia afaka misoroka ny akanjo tsy simba, ary ho lasa mavo sy hihamafy ny akanjo
4. Ny T-shirt miloko maizina dia azo alemana anaty rano masira mandritra ny 1 ~ 2 ora rehefa voasasa voalohany, izay afaka misoroka ny akanjo tsy hiova loko
5. Apetraho ny volon'ilay T-shirt rehefa maina, ka tsy mila mandoro azy ianao.
6. Aza manasa T-shirt amin'ny akanjo mainty hafa, sao hanjavona ny akanjo, hiampita loko,
7. Aza avo ny hafanana, ary ny hafanan'ny rano an'ny T-shirt landihazo dia tsy tokony hihoatra ny 30 degre, mba tsy hanafainganana ny fahanterana ary hianjera amin'ny fanontana. Soso-kevitra amin'ny fanasana lobaka fanatanjahan-tena fialam-boly 1. fanoherana alkali sy hafanana tsara.
Ahoana ny fanasana T-shirt mihinjitra?
T-shirt elastika dia tsy tokony hasiana vy amin'ny hafanana ambony hisorohana ny fahasimban'ny elastika amin'ny lamba; aza mihetsiketsika, izay hanimba ny elastika amin'ny lamba; T-shirt elastika sasany dia tenona misy kofehy voahitsakitsaka, volo ny kofehy, ary miloko kokoa ny lamba ambonin'ilay lamba. Tandremo sao diso tafahoatra rehefa manasa Mavesatra ny fisorohana ny fikororohana be loatra; T-shirt elastika dia tsy azo aseho masoandro mba hisorohana ny fahasimban'ny elastika amin'ny lamba.
Amin'ny ankapobeny, rehefa manasa T-shirt ianao, dia miezaha tsy manasa azy ireo, satria hisy fiantraikany amin'ny fanontana sy ny elastika amin'ny lamba izany. Ankoatr'izay, tsara kokoa ny maina azy ireo amin'ny lafiny atsimbadika mba hisorohana ireo lamina vita pirinty tsy hiova.